Abanini abaninzi beevenkile zentengiso kunye nee-boutique basebenzisa imiboniso yeplanga ukubonisa iimveliso zabo, kodwa ukusetyenziswa kweekhadibhodi pop pop nako kuyathandwa. Uyakuqaphela iindawo zokubonisa zekhadibhodi kunye neeshelfu ezisetyenziswa ngexesha lemiboniso yorhwebo nangaphandle kwevenkile ezahlukeneyo njengendawo yokuthenga (POP) ...
Yintoni ibhokisi eqinileyo? Iibhokisi eziqinileyo zezinye zezona ndidi zifunwayo zebhokisi yokupakisha. Phantse zonke iimveliso zodidi zisebenzisa ukupakisha okungqongqo kumanqaku abo abizayo kwaye athambileyo. Ukupakisha ibhokisi eqinileyo kuyaziwa ngokuzinza kwayo, ukuthembeka, ukomelela kunye nolwakhiwo oluqinileyo. Ezi dielectri ...
Izinto ze-EVA Foam: Esona sikhokelo siqinisekileyo
Unokufumana phantse yonke into enegwebu ye-EVA kuyo yonke indawo! Zihlala zibonelelwa ngabathengisi begwebu be-EVA njengamagqabi e-foam e-EVA, ii-rolls ze-EVA foam, i-EVA foam puzzle mats, iiteyiphu ze-EVA zetapile njalo njalo. Kodwa ngaba uyayazi ngokwenene le nto igwebu? Apha sikubonisa indlela yokwazi izixhobo ze-EVA ezingcono. Nje ...